ရက်လွန် ၁၅၀၀ တန် Sim Card များအား သက်တမ်းတိုးနိုင်ပြီ ~ IT SuBoo
ရက်လွန် ၁၅၀၀ တန် Sim Card များအား သက်တမ်းတိုးနိုင်ပြီ
8/03/2013 နည်းပညာသတင်းများ No comments
၁၅၀၀ တန် Sim Card များအား သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း အဆိုပါ မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ပက်သက်သည့် Hot Line (3456) မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ရန်ကုန်တွင် အသုံးပြုသည့် တန်ဖိုးနည်း ၁၅၀၀တန် Sim Card များအား သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်လိုပါက ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းရှိ ဗဟိုစာတိုက်ကြီး အပေါ်ထက်တွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရက်လွန်ပါက
သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လျှော်ထားရန် စာချုပ်၊ ဖုန်းကတ်၊ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူတို့ လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အကယ်၍
သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဌာနတို့မှ စာအချုပ်ထုတ်ပေးထားခြင်းမရှိပါက စာချုပ်ထုတ်မပေးရသေးကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊
ဌာနမှ ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရက်လွန် ၁၅၀၀ တန် ဆင်းကတ်များ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနိုင်ခြင်းနှင့် ပက်သက်၍ ဇူလိုင်လ ၂၅ရက်ထုတ် မြန်မာ့ အလင်းသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
သက်တမ်းလွန်ရခြင်းအတွက် ထောက်ခံချက်(ကတ်ထုတ်ပေးသည့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဌာနရဲ့ထောက်ခံချက်) ပိုင်ရှင်ရဲ့ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကတ် မိတ္တူတစ်စောင် စသည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး မန်နေဂျာထံလိပ်မူ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း
ဖော်ပြထားသည်။ ဖုန်းကတ်ဝယ် ယူထားသည့်နေ့မှစ၍ ၁၅ရက်အတွင်း တယ်လီဖုန်းဆင်းကတ်တွင် မူလထည့်သွင်းပေးထားသည့် တယ်လီဖုန်း ခေါ်ဆိုခ ၃၀၀ ကျပ် မကုန်မီ တယ်လီဖုန်းသုံးစွဲသူသည် ..
အနည်းဆုံး ၅၀၀၀ ကျပ်တန်
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက သတင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဆင်းကတ်ကို အခြားသူတစ်ဦးဦးသို့ လက်ဆင့်ကမ်းရောင်းချခြင်းမှ ကာကွန်ရန်အတွက် ၁၅ရက်အတွင်း အသုံးပြုခြင်းမရှိပါက အဆိုပါ ဖုန်းကတ်သည် အလိုအလျောက် လိုင်းပတ်သွားမည်
ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို တန်ဖိုးနည်းမိုဘိုင်းဖုန်းများကို လစဉ် ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်ဖြင့် ပြောဆိုခ ကျပ်၂၅၀၀ အနည်းဆုံး သုံးစွဲရန် သတ်မှတ် ထားပြီးဖြစ်၍ နှစ်လပြည့်သော်လည်း ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်မှ ၅၀၀၀ ကျပ်ကို အပြည့်မသုံးစွဲပါက အလိုအလျောက် ကျပ် ၅၀၀၀ ပြည့်သည်အထိ ဖြတ်တောက်သွား..
မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖြည့်သွင်းထားသော ငွေကုန်ဆုံးပြီးနောက် ၁၅ ရက်အတွင်း ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်းမရှိပါက အဆိုပါဖုန်းကတ်သည် အလိုအလျောက်လိုင်းပိတ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Ref - Internet Journal (Vol.14, No.29)
huawei Ascend G510-0010 Firmwareတင်နည်း( Build num...
Window screen မှာမြန်မာလိုပေါ်အောင်လုပ်မယ်
IT နည်းပညာများကိုထပ်မံစုစည်းထားတဲ့ IT စာပေ apk
I ကြိုက်တဲ့မောင် တွေအတွက် How to install Zawgyi ...
MWD TV နှင့် ThaZin FM အစီအစဉ်များကို Apple MAC မျ...
Jelly Bean မှာ မြန်မာစာရေးတာမှန်လာတဲ့ Bagan Keybo...
IT စုဗူး အတွက်‌ offline apk for Android
Websit, Blog များကိုoffline မှာ ဖတ်လို့အောင် Andor...
Easy Jailbreak 6.1.2,3,4 Untethered With Evasi0n 1...
HF Scientific Calculator apk
HipHop သီချင်းတွေကို တ၀ကြိးဒေါင်းနိုင်မယ့် HipHopB...
Auto Code ထည့်ပေးတဲ့ Viber နောက်ဆုံးဗားရှင်း
Smurfs' Village Hack APK v1.2.9a +DATA(Unlimited G...
Google Play ၀င်မရသူတွေအတွက် Google Play ကFree app ...
APK ဖိုင်တွေကို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာမြင်အောင်ပြပေးမယ့် ...
Webpage တွေကို Android ပေါ်မှာတင် PDF ကိုပြောင်းပေး...
မျှော်နေသူတွေအတွက်လာပါပြီ Candy Crush Saga hack f...
Super Mario ကို Android ပေါ်မှာဆော့ကြမယ်
Samsung Galaxy S4 LTE GT-I9505 အား Root လုပ်မယ် CW...
Galaxy S4 I9505 LTE မြန်မာစာအမှန်သွင်းနည်း
Music Player အလန်းလေးAstro Player Pro apk
ငွေဖြည့်ကတ် ကို Scan ဖတ်ပြီး ထည့်ပေးနိုင်တဲ့ EZCha...
Facebook ကို အလန်းဆုံး Style နှင့်သုံးနိုင်မယ့် Kl...
Mp3 ဖိုင်တွေကို မိမိစိတ်ကြိုက်ဖိုင်ဆိုဒ် ချုံ့နိုင...
Mobile Doc Scanner (MDScan) 2.0.35 update (6.8.201...
** Animation တွေနဲ့ sms ပို့နိုင်မယ့် Magic SMS **...
MX Player 1.7.16 LATEST VERSION
ရက်လွန် ၁၅၀၀ တန် Sim Card များအား သက်တမ်းတိုးနိုင်...
NotifierPro 8.9 (latest version)
Photo Wander v3.0.5 ( Latest Update )
Android phone တိုင်းမှာ မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ...
MPT ၏ Voice Mail Service အကြောင်း